दशा पन्छाउने मात्र हैन तान्त्रिक विद्याले कर्म पतिवर्तन गर्न सक्छ : अघोरी प्रेम बहादुर खत्री
Mon, May 16, 2022 5:53 PM [email protected]
क्विक नेपाल २०७८ फाल्गुण १९,बिहिवार ०६ : ०३ PM
तपाईँलाई के भनेर चिन्न सकिन्छ ?
मेरो नाम चाँही अघोरी भुतनाथ बाबा । समाजमा चिन्ने गरेर चाँही अघोरी हुनुभन्दा पहिला प्रेम बहादुर खत्री, झापा निवासी । मैँले कामररुखकामुख्या भन्ने इन्डियामा तन्त्रशिरोमणी त्यहाँ कामरुखकामुख्यामा गएर सिकेँ । अठार वर्ष त्यहाँ बसेर तपस्या गरेर मैँले तन्त्र सिकेँ ।
तान्त्रिक विद्या नै किन सिक्नुभयो ?
यथनाम प्रेत आत्मा मोक्ष प्रतिभव । जति पनि दुखित छ, अकाल मृत्यु, लाहाचार कुनै अचानक मृत्यु, कुनै दुर्घटना, अकाल मृत्यु, चोट पटक लागेर कसैको वायुहरु यस्ता मृत्यु भएका मान्छे जो आधाकल्चो जो प्रेतमा बसको हुन्छ उनीहरुको उद्धार गर्नका लागि मैले चाँही तन्त्र मन्त्र विद्या सिकेँ । त्यसपछि जब म नेपाल भित्रिए यहाँ दक्षिण एसिया ज्योतीष महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ शिर्षदेउ विष्ट हाम्रो गुरु । उहाँसंग प्रमाणपत्र भेटिकन मैँले ज्योतीष शास्त्रतिर लागेर मैँले बैद्य पुजाहरु गरेर बसिरहेको थिए । त्यसपछि मैँले यहाँ जति दुखि पीडित व्यक्तिहरु भेट्दै गएँ । त्यसपछि उनीहरुको दुखका समस्याहरु लिएर उद्धार गर्नका लागि चाँही म दक्षिणकालीमा भैरवको पुजा गर्न थालेँ । अनि मैँले कालो वस्त्र धारण गरेँ । अहिले मैँले दक्षिणकालीमा नै पुजा पाठहरु गरिरहेको छु । यसरी नै ५५ वर्षको आयुमा देशको लागि मानव जातीको निम्ति, सृष्टिका निम्ति, श्री आरध्य पशुपतिनाथ जो चाँही पशु र प्राणीको नाथ उहाँको विचार धारण लिएर आँफु पनि शुद्ध बसेर, चोखो बसेर जो चाँही पशु र प्राणीको रक्षाको निम्ति कर्तव्य पालन गरेर चाँही मैले सेवा गरिरहेको छु ।
तपाँइले तान्त्रिक विद्या त सिक्नु भयो तर औपचारिक शिक्षा त पढ्नु भएन है ?
मैँले तान्त्रिक विद्या सिकेर औपचारिक शिक्षा पनि पढेँ । मैँले महाइन्द्रजालसिद्ध गरे त्यो चाँही कामरुककामुख्या इन्डियामा । जहाँ चाही सतिको यौनी पिठ झरेको हुन्छ । उहाँको मन्त्रचाँही ओम ओम बर्मडाकिनी हाँ काली, बह्मकी बेटी इन्द्रकी शाली ओम कामरुकामुख्या फट स्वाह भन्ने चाँही यौनी पिठ छ । उँहाबाट चाँही मानव जाती, प्रगति पुरुष शिब लिङ्गको रुप भएर जसरी हामी संसारमा जिवित प्राणीहरु सृष्टि भए त्यसरी नै तन्त्र विद्याको सृष्टि हुने चाँही यौनिक पिठबाट कामरुकामुख्या ग्वाटी इन्डियामा छ त्यँहाबाट मैँले सिकेँ ।
कति वर्ष भयो तान्त्रिक विद्यामा लाग्नुभएको ?
म अहिले ५५ वर्षको भएँ भने पछि ३५ वर्ष भयो यो तान्त्रिकमा विद्यामा लागेको ।
दक्षिणकालीमा भैरवको पुजा गर्ने बाहेक अरु के के गर्नुहुन्छ हजुरले ?
भैरवको पुजा गर्ने बाहेक चाँही फिलाल त्यसको अगाडि चाँही मैले कुनै प्रेत आत्माहरु मोक्ष गर्ने, कसैको वायु गर्ने, दिव्यरुपले जो माताहरु शरिरमा धारण गर्नुहुन्छ जो माता पिता जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई नियम कानुनहरु बताएर उँहाहरुले कसरी पुजा गर्नुहुन्छ त्यसलाई त्यो विधिहरु मैँले पुर्ण गर्ने, यी कार्यहरु गर्थे ।
तपाईँसंग आएका ग्राहकहरु चाँही कतिको सन्तुष्ट छन् ? नेपालभरिमा धेरै मानिसहरु हुनुहुन्छ । दक्षिण एसिया, विश्व हिन्दु महासंघ, ज्योतीष महासंघबाट, नेपालभरीमा र विदेशका मान्छेहरु पनि फोन गरेर फुक्ने, उनीहरुकोे कार्य सफल पार्ने, बच्चा नहुनेलाई बच्चा हुने गर्ने, यी सबै कार्यहरु यो बेलासम्म विना शुल्क नै गर्ने गरेको छु । मैँले आफ्नो जीविका चाँही दक्षिणकालीमा पुजा गरेर नै चलाइरहेको छु ।
तान्त्रिक विद्या विषेश विद्याको रुपमा अगाडि बढिररहेको छ , तर कतिपयले गलत प्रयोग गरेको पाईन्छ ? यौन हिंसा गर्ने ? पैसा ठग्ने गरेको पाईन्छ ?यसमा तपाईको धारणा चाँही के हो ?
ती व्यक्तिहरुलाई भन्नुहोस कालो बस्त्र लगाएर जो म तान्त्रिक हो त्यस्ता व्यक्तिहरुले चाँही पहिला मुल आधार चाँही तन्त्रको विद्या लिएर सिक्नुपर्छ । काठमाडौँ पुरा तन्त्र विद्या भएको ठाउँ होईन । तान्त्रिक विद्या विधीले गर्दा नै यो भएकाले हामीले कामरुकामुख्या बाट देउता किनेर काठमाडौं ल्यायौँ । त्यो देउता ल्याएर नेपालमा स्थापना गर्‍यौँ । जो गोरखनाथ, भैरवनाथ उनीहरु भन्छन, नौ नाथहरु हुन्छन । जो चाँही थापाथली गोरखनाथबाट मैँले जनै धारण गरेर, जुन चाँही मैँले पुजापाठ गर्छु । उहाँहरु जनै धारण गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । कानमा जुन चाँही मैले कुन्डल लगाएको छु त्यो चाँही उहाँहरुले पनि धारण गरेको हुनुपर्‍यो । जुुनचाँही बराठको सिँग मैँले यो बाहिर दाहिने पटि भिररेर धारण गरेको छु । जुन धारण गरेको मानिस चाँही पक्का तन्त्र सिकेको मानिस हो । र उसले तान्त्रिक विधा सिक्छ र त्यो नाथ समुदायको हो भन्ने परिचयहरु पाउनु पर्‍यो । अन्यथा बाहिर कालो बस्त्र लगाएर बाहिर ठग्ने पैसा माग्ने चाँही पक्का तान्त्रिक होइनन् । पछि गएर उहाँहरुले चाँही कुनै राम्रो ठाँउ पाँउदैनन् ।
तपाँईको परिवारमा को –को हुनुहुन्छ ?
मेरो परिवारमा अहिले त दाजु हुनुहुन्छ । अनि मैँले स्वयम नै शिवकोठी आफ्नो संगिनी जस्तो प्रगति पुरुष भएको जस्तै मेरो श्रीमती पनि माता हुनुहुन्छ । उहाँ स्वस्थानी आउँनुहुन्छ र हामी दुबै जनाले भक्ति भावना गरेर यसरी चलिरहेको छु । दक्षिणकाली सतिखेल भन्ने ठाँउमा हामी दुबै जना बसोबास गरिरहेका छौँ ।
विना शुल्क सेवा गर्ने कुरा गर्नुभयो, घर कसरी चल्छ ?पैसा कमाउने सोचछैन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने मैँले दक्षिणकालीमा टिका लगाएर भैरवको पुजा गरेर शनीवार, मंगलवार, अस्टमी तिथिमा जति आर्जित गर्छु, यतीले नै पुगिरहेको छ । जुन चाँही हामी दुई जनामा प्रगति पुरुष भएपनि हामी दुई जनामा मँलाई शिव भैरव शक्ति आउने र मेरो श्रीमतीलाई चाँही माता आउनेहुन्छ । यस्तो शक्ति आउने भएको हुनाले मैँले सात वर्षमात्र भयो गृहस्थि जिवन विताएको । सात वर्ष भएपनि हाम्रो सन्तान भएको छैन । बच्चा–बच्ची पनि छैन । हामी त्यहा पाँच हजार रुपैँया भाडा तिरेर बसेका छौँ । हामीले त्यहाँ अरुबाट केहि लिनु पनि छैन किनभने चैतन्य ब्रह्मा को बास भएको कारणले गर्दा हामी लोभ लालच हिंसामा मन राख्दैनौं । त्यसैले लोभ लालच हिंसा हामीलाई केहि लाग्दैन । भगवानको भक्तिका कारणले किनकी जसरी हामी आमाको गर्भमा बसेर आएर तपो ज्ञान गर्‍यौँ । चौरासी जुनी भोग्यौँ । अब यो सृष्टि पृथ्वीमा आएर कर्म गरिरहेका छौँ । यो कर्ममा जस्तो शुन्यमा आयौँ हामी त्यस्तै शुन्यमा नै भएर जाने हो । किन कि लोभ लालचमा नफस्ने मेरो ईच्छा हो ।
कोहि तपाईँसंग आएका ग्रहकहरुले गुरुजी तपाँईसंग आएपछि हाम्रो त चमत्कार नै भयो । उपलब्धी यस्तो भयो भनेर तपाईँलाई कसैले भनेका छन् ?
अहिले सम्म त्यस्तो एक हजार जति मानिसहरु आईरहेका छन् । सबैलाई म दक्षिणकालीमा बस्ने एउटा कालीपुत्र भुतनाथ बाबा अघोरी भनेपछि सबैजस्तो धेरै मानिसहरुलाई यो थाहा छ । जो विश्वासले आउनुभएको छ, उनीहरुको धेरै विकास भएको छ । सन्तान नहुनेको सन्तान भएको छ । गृस्थि नहुनेको गृस्थी भएको छ । कसैको गृस्थी टुट्नेको गृस्थी मिलाएको छ तर पुर्णरुपले नियमको आधारमा यो कार्यहरु गरेर मानिसहरु धेरै खुशि छन् । म आफ्नो पब्लिसिटी नगरेको, म चर्चामा नआएको मात्र हुँ । मलाई मन पनि छैन । म सबैको निशुल्क सेवा गर्न चाहन्छु । जसको सेवा गर्छु उनीहरुखुशी छन् । जुन मैँले पाएको शक्ति छ र मेरो कर्तव्य चाँही म आफैँसंग रहीरहोस भन्न चाहन्छु । यो समाजमा मानिसहरुको चर्चा भएर, झुट्टो भएर, देखावटी, भाइरल यस्तो प्रकारको छ । म यस्तो चाहदिँन । म अहिले भक्ति भावना गरेर बसेकोछु । अहिले घरघरमा माताहरु भए, पिताहरु भए, नक्कलीहरुलाई परास्त गरेर सत्यको स्थापना गर्नुपर्छ । सत्य भनेको ज्योती हो । भोली आँफुले लाने केहि छैन । आफुँले कर्म गरे दिएको भक्ति शक्तिमा चाँही उजागर होस् भनेर हो । आज हजुरलाई परिचय दिन चाहेको ताकी संसारले बुझ्न सकोस भनेर । एउटा देउ शक्ति चाँही दण्डचाँही नलागोस । भोली पर्सी पछुताउनु नपरोस भनेर चाँही मैँले यो गर्दैछु ।
धेरैको सेवा गर्न चाहनुभएको छ कि अथवा होइन मलाँई सम्झेर आँउनेको मात्र काम गर्ने गर्छु भन्नुहुन्छ ?
मैँले प्रचार चाँही धन आर्जन गर्नका लागि नभई सेवाको लगि गर्ने गरेको छु । जस्तो की झुन्डिएर मरेको, डुबेर मरेको, जलेर मरेको अर्थात कुनै काल खण्डले मरेको जस्तो कि गोस घन्टाऊ भन्ने हुन्छ राती बसेर हामी अघोरीको काम मध्यान्तरमा कुनै चिहान, कुनै मसान घाट अर्थात भैरवको स्थानमा बसेर चाँही उनीहरुको आत्माचाँही मुक्त होस, तृप्ति होस, फेरी जन्म पाउला या नपाउला तर उनीहरुकौ कर्मचाँही राम्रो होस् भनेर साधना गर्छु, मोक्ष गर्छु । किनभने प्रकृति पुरुषले लगाएको सृष्टिमा चाँही बदनामी दागहरु चाँही नआओस भनेर चाँही मैँले यो प्रचार गर्न चाहेको ।
हजुरले ग्रह दशा मोक्षलगायत अन्य कुण्डली हेर्ने र चिना हेर्ने पनि गर्नुहुन्छ ?
म चिना हेर्दिन । म गर्भस्थान देखिको गर्भमा कसरी प्रवेश हुने ? अनि नौ महिना कर्म उसले के गर्‍यो ? जन्मनु उप्रान्त उसको के छ उसको देउता के छ ? र उसले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो ? म यो कुरा मानिसलाई भनेर उनीहरुको कर्म अगाडि चलाँउन सहयोग गर्छु । अन्य कुनै पनि नित्य, पुजा पाठ, बास्तु देउता कुनै पनि न्वारन म गर्छु । जय पशुपतीनाथ